🏆 Siri ye-Android: Ngaba kunokwenzeka? Ngabaphi abancedisi esinokubasebenzisa? UKUHLAZIYWA 2021 | Izikhokelo ze-Android
I-Siri ye-Android: ngaba kunokwenzeka? Ngabaphi abancedisi esinokubasebenzisa?
U-Emilio Garcia | 30/09/2019 12:31 | Izifundo ze-Android
Siri ngumncedisi welizwi kwizixhobo zeApple ekuvumela ukuba wenze naliphi na inyathelo ngokusebenzisa imiyalelo yelizwi. Nangona kunjalo, enkosi ngokusebenza kwayo, abantu abaninzi baye bazibuza ukuba kunokwenzeka ukukhuphela esi sixhobo kwii-mobiles ze-Android.
Oko kukuthi, ukukwazi ukuthumela imiyalezo yelizwi ngokuthe ngqo kwizixhobo zabo, nokuba umncedisi welizwi (njengoSiri) wenza izinto ezinje ngokufunda imiyalezo, ukudlala umculo, ukuseta ialam okanye ukukuxelela iindaba zosuku.
1 Ndingayikhuphela iSiri kwi-Android?
2 Umncedisi kaGoogle
3 URobin-Umncedisi welizwi we-AI
5 Ukugqithisa- uMncedisi welizwi lomntu
6 UMncedisi weLyra
7 Umncedisi weAgenda
8 Umncedisi wam
9 Isikolo-uMncedisi woFundo
12 NgoLwesihlanu: UMncedisi oNcedisayo
13 Annunciator okrelekrele
Ndingayikhuphela iSiri kwi-Android?
Ngelishwa oku akunakwenzekaUkusukela, nangona zikhona ii-APK (iifayile eziqulathe usetyenziso) ezibonelela ngalo mncedisi, ukubanakho ukwenza imisebenzi akulunganga kakhulu njengoko ziinguqulelo zobuxoki eziveliswe ngabalandeli.
Ngethamsanqa, zikho ezinye iindlela zeSiri ye-Android ezinenani elifanayo leempawu ezibandakanyiweyo, kwaye zinokuphuculwa kwimiba eyahlukeneyo yenkqubo. Ezonaapps ziphambili kule meko zezi:
Sesona sixhobo siphambili I-Siri ilingana ne-Android, kuba ikuvumela ukuba ugqibezele nawuphi na umsebenzi ngokuthi "Kulungile Google" kwaye emva koko uphawule ngento ofuna ukuba yenziwe yile nkqubo.
Inesakhono sokudlala umculo, ukubukela iividiyo, uGoogle nasiphi na isihloko, ukuseta i-alamu, ukuya kwicandelo lokunxibelelana, ukufowuna, ukuthumela ii-imeyile kunye nemiyalezo ebhaliweyo.
Iyavumela Nxibelelana neenkonzo ezahlukeneyo zikaGoogle, njenge "Google Maps", kuba inika iindlela okanye iindawo ngexesha lokwenyani.
Eyona nto intle kukuba ukhuphelo lwayo lusimahla kwaye kwizixhobo ezininzi ze-Android efakiweyo kumzi-mveliso. Iyenziwa ithi "Kulungile kuGoogle" okanye ngaphakathi kweapp kaGoogle, kwimakrofoni icon.
URobin-Umncedisi welizwi we-AI
Umthuthukisi: Indawo yokurekhoda
URobin ungumncedisi obalaseleyo welizwi, kwaye oko ibonelela ngemisebenzi emininzi engenazandla kubandakanya ukwamkelwa kwemozulu, ukukhangela iindaba kunye nokuseta izihloko zokudlala.
Iqwalaselwe ngokulula kwaye ikuvumela ukuba wenze ii-alamu kubhabho, kunye nokuqhuba upapasho kwinethiwekhi yoluntu njenge "Facebook" okanye ukukhangela kwisikhangeli sikaGoogle.
Ukukhetha kwelizwi kuhluka kangangokuba inikeza enye indlela "Ndixelele ihlaya", apho "uRobin" ejonga ezinye iindlela kwisikhangeli sakho esingundoqo esinokonwaba.
Kufuneka iqatshelwe ukuba esi sicelo sisesenguqulelo lwe-beta, kodwa sibonelela uhlaziyo oluninzi inyanga nenyanga ezivumela ukuba kusonjululwe iingxaki zangaphakathi, ke ngoko zibonelela ngenkonzo esemgangathweni.
Ewe kunjalo, ukuba kuya kufuneka ugcine enye, sicebisa uMncedisi kaGoogle.
Enye yezakhono eziphambili zeSiri, kwaye isebenza kwinani elikhulu lezixhobo ezifana ZTE, Samsung kunye neHuawei, nangona zonke kufuneka zivelise iinguqulelo eziphambili ze-Android (ezingazukuba yingxaki, kuba phantse zonke ii-mobiles zivela kumzi-mveliso kunye nohlaziyo lwamva nje).
Ikuvumela ukuba wenze uluhlu lokuthenga kwiAmazon ngokusebenzisa imiyalelo yelizwi, lawula umculo, lawula uthungelwano lwasentlalweni, sebenzisa amacandelo esixhobo kunye nezinye iindlela ezininzi.
Ngokufanayo, iyakwazi ukunxibelelana nezinye izixhobo kwi balawule kude, ukuba ngulo mncedisi yenye yezona zikhethiweyo kumakhaya smart ngenxa yenani elikhulu lemisebenzi ayibonisayo.
Ukongeza, iyakwazi ukulungelelanisa ilizwi lakho kunye nesigama kwinkqubo yayo, ukuze isebenze kakuhle ngexesha lokugqiba imisebenzi oyicwangcisileyo, kwaye uzibhloke xa omnye umntu echaza umsebenzi ukuba awuyiqondi loo nto. nguwe.
Ukugqithisa- uMncedisi welizwi lomntu
Umthuthukisi: IIMPAWU ZOKUFUNDA
Owona msebenzi uphambili kukusebenza njengenguqulelo yeSiri ye-Android, kuba ihambelana ngokugqibeleleyo nenkqubo yokusebenza kuzo zonke iifowuni ezine Iinguqulelo ezingaphezulu kwe-4.4.
Umncedisi waziwa njengo "Jarvis", ebhekisa kumngcamli wobukrelekrele "uTony Stark" owayenazo kwimidlalo yokuhlekisa xa waba ngu "Iron Man".
Inezinto ezininzi ezibandakanyiweyo, kwaye eyona nto intle yile Cela iimvume ezahlukeneyo ukuba zisetyenziswe, kwaye ukuba uthe wakhankanya umsebenzi ongalungiselwanga wona, iapp iyakuxelela ukuba ungayinika njani ukufikelela.
Ine "Imowudi emnyama" ebandakanyiweyo ukuze ukwazi ukutshintsha isitshixo sayo esiphambili kwithoni emnyama, nangona ibonelela ngeminye imixholo enemibala ngakumbi kuqwalaselo olulula kakhulu ukuseta.
Umthuthukisi: Izisombululo ezingezizo ezokwenziwa
Ngumncedisi wobukrelekrele bokuzenzela iveza yonke imisebenzi yeSiri ye-Android kwaye ungeze ezinye, kuba ziphuculwe ngakumbi kwaye zibonisa unxibelelwano kunye nawe ngexesha lesicelo sakho somsebenzi.
Ikuvumela ukuba udlale iividiyo ezivela kwigalari okanye kwiYouTube, uvule icandelo elithile lesixhobo, ulawule abafowunelwa kwikhalenda, ukhangele ulwazi malunga nemozulu kwaye wenze izilumkiso zokuthintela.
Kwakhona Ukwazi ukuguqula izicatshulwa, fumana indawo, usete amanqaku kwaye uxele iziqhulo ezifumaneka ngaphakathi kwamaphepha aphambili kuGoogle Chrome.
Eyona nto ilungileyo yile inomgangatho we-80/100 Ngokutsho kwabagxeki bewebhu kunye nokukhuphela kwayo kukhululekile, kufuna iimvume ezimiselweyo kwasekuqaleni kofakelo.
Ngumncedisi welizwi lowo isebenza kuphela ngecandelo lamanqaku yeselula yakho, apho ikwaziyo ukwenza, ukulungisa okanye ukucima umxholo okwelo candelo.
Ayinayo imiyalelo yelizwi emiselweyo, kuba ukuyenza nje ukuba isebenze kwaye ucacise uhlobo lwenqaku okanye isikhumbuzi ofuna ukusibeka, sibhala okanye sisuse sodwa.
Ine "Indlela ezenzekelayo" edityanisiweyo, ekuxelela ngayo ngomlomo wonke umyalezo ewufumene kuwe ukuze uqinisekise ukuba uchanekile. Kwaye, ukuba kunjalo, ibhala ngokuzenzekelayo incwadana.
Ngokufanayo, isebenza ngeelwimi ezininzi (eyona iphambili ngu "isiNgesi") kwaye ikuvumela ukuba wabelane ngeminyhadala oyenzileyo kunye nabantu onxibelelana nabo, nangona ungakwenza oku ngesandla kuphela.
Sisicelo esifana neSiri se-Android esibonelela ngehologram ye Umfazi ogama lingu "Nicole" eyenza yonke imisebenzi oyichazayo.
Ikuvumela ukuba ubize nabani na kwaye ulawule abafowunelwa abohlukeneyo bakwincwadi yefowuni. Ikwalawula ukukhangela naluphi na uhlobo lomxholo olufumanekayo kuGoogle.
Uyakuvumela vula nayiphi na enye into ngokuchaza nje kwaye iveza inqaku apho iphendula kuzo zonke iintlobo zemibuzo oyibuzayo ngaso nasiphi na isihloko.
Kuyakhawuleza kakhulu, kwaye ngaphandle kokuba ngumncedisi olula, kuyacetyiswa kuphela kwabo baneminyaka engaphezulu kwe-17 ubudala, kuba ibonisa icandelo "laBantu abadala" apho liphendula imibuzo engamanyala.
Umthuthukisi: Isixhobo esivuyisayo
Nangona ayifani ncam neSiri, yinkqubo yokunceda ebalaseleyo kubantwana abasesesikolweni okanye kubasebenzisi abafunda eyunivesithi, enkosi kwinto yokuba iishedyuli kwaye iququzelele iishedyuli ngendlela ofuna ngayo.
Ezona zixhobo zibalaseleyo zokuthatha inqaku kwi-Android
Ukongeza, ikuvumela ukuba ugcine umxholo njengomsebenzi wasekhaya kwaye usete izikhumbuzo zokuthintela iimviwo okanye iminyhadala ebaluleke kakhulu eya kwenzeka kwigumbi lokufundela.
Inecandelo le "Lawula ixesha lakho" ekuvumela ukuba wazi ixesha elithathwayo ukwenza isenzo esimiselwe kwangaphambili. Kwangokunjalo, iyakwazi ukugcina ulwazi olubalulekileyo malunga nootitshala njengamagama abo kunye neenombolo zomnxeba.
I-AriaBot, umncedisi welizwi
Ngumncedisi obonakalayo ofana kakhulu no-Apple, ocela ulwazi lwakho lomntu siqu njengesini okanye umhla wokuzalwa ukufikelela kunxibelelwano olungcono nawe.
Ikuvumela ukuba ugcine amanqaku, uguqulele izicatshulwa ezahlukeneyo zezwi, ukhangele inani elikhulu lezinto kuGoogle, usete izikhumbuzo kumhla nangexesha elimiselwe kwangaphambili, kunye nokuseta iindawo ngexesha lokwenyani.
Eyona nto intle malunga nesi sicelo kukuba ivumela unxibelelwano ngokwendaloOko kukuthi, ayinayo imiyalelo engafaniyo "noMncedisi kaGoogle", ke unokuchaza ngokulula umsebenzi ofuna ukuba uwenze kwaye uya kuwenza.
Ukongeza, ivumela qwalasela imiba yeselfowuni yakho (ukuba unika imvume) kwimowudi oyifunayo, nokuba kukwandisa ivolumu, yenza imo yamandla, wenze utshintsho kwikhibhodi okanye kwiscreen kunye nezinye izinto.
Vani -Lizwi lakho eliNcedisayo eliphendula iifowuni
Umthuthukisi: IBolo International Limited
Sisixhobo esichazwe kwangaphambili ukuba sisebenze njenge fownela umncedisi, kuba ngayo unokuchaza ukuba uyafuna okanye awuphenduli umnxeba ngomyalelo welizwi.
Kwangokunjalo, ngaphambi kokuba uyiphendule, ungakhankanya "uSomlomo" ukuba amkele unxibelelwano kwaye asebenzise inqaku ngokukhawuleza. Unokwenza ngokwezifiso ukuba Ndenze ngokwamazwi owafunayo.
Unokutshintsha umxholo ongagqibekanga ngokokukhetha kwakho kwaye unokongeza iifoto ezikwi "Igalari" okanye kugcino lwangaphakathi lwesixhobo sakho kwimvelaphi yaso.
Ukongeza, ivumela vimba ukufikelela kwifowuni rhoqoNgamanye amagama, umyalelo welizwi unokusetyenziselwa ukuba inombolo yoqhakamshelwano ibekwe ku "Uluhlu oluMnyama" kwaye kungasamkelwa fowuni kuyo.
NgoLwesihlanu: UMncedisi oNcedisayo
Sisicelo esisesinye kuSiri esinezixhobo ezinenkqubo yokusebenza ye-Android, ebhekisa kumlinganiswa ka "Lwesihlanu", owokugqibela engumncedisi ka "Tony Stark" kwiimuvi zeMarvel.
Izibonelelo phantse zonke iinketho ezichazwe apha ngasentla kwizixhobo, kuphela kule meko ivumela ukuseka incoko ethe ngqo neqonga.
Kungenxa yokuba, ungabuza nantoni na kwaye "uLwesihlanu" uya kuphendula ngokuzenzekelayo, nokuba ngumbuzo malunga nembali, ifilosofi, ibhayoloji okanye malunga nolwazi lwezemidlalo kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo.
Umthuthukisi: Ingris Pvt. Ltd.
Isebenza ngokuthe ngqo njenge iwizard yokwazisa, kuba ivumela ukwazi ulwazi malunga nomnxeba ongenayo kunye nomnxeba okanye inombolo eyenzayo, kunye nemiyalezo efunyenwe ngexesha elithile.
Iyafumaneka ngalo naluphi na ulwimi, kwaye ikuvumela ukuba ulawule iintengiso zezicelo, kubandakanya iinethiwekhi zentlalo ezinje ngeWhatsApp, Facebook nezinye.
Okokugqibela, nika umsebenzi we Cwangcisa useto lwesilinganisi esifanelekileyo, kuluhlu, ithoni kunye neminye imiba kuhlobo lwelizwi aya kuncokola nalo.
Ndicinga ukuba ngale nto sele sinoluhlu olwaneleyo lokukhetha, kodwa sivulekile kwizindululo. Ukuba ufuna ukushiya izimvo zakho okanye ukongeza ezinye, ungalibali ukusishiya nezimvo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izikhokelo ze-Android » Izifundo ze-Android » I-Siri ye-Android: ngaba kunokwenzeka? Ngabaphi abancedisi esinokubasebenzisa?
Imidlalo yebhola ekhatywayo eli-10 ngaphandle kwesidingo seWi-Fi